အီလက်ထရောနစ် ကုန်ထုတ်လုပ်မှု ကုမ္ပဏီ In-Tech သည် IPO လျှောက်လွှာ ကို HKEx သို့ပြန်လည် တင်သွင်း သည် - Pandaily
အီလက်ထရောနစ် ကုန်ထုတ်လုပ်မှု ကုမ္ပဏီ In-Tech သည် IPO လျှောက်လွှာ ကို HKEx သို့ပြန်လည် တင်သွင်း သည်
Jun 02, 2022, 12:45ညနေ 2022/06/02 14:06:37 Pandaily
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က ဟောင်ကောင် စတော့အိတ်ချိန်း (HKEx) ၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရIn-Tech Holdings သည် အများပြည်သူ အတွက် လျှောက်လွှာ တစ်ခု ထပ်မံ တင်သွင်း ခဲ့သည်Dongxing Securities (Hong Kong) သည်တစ် ဦး တည်းသော စပွန်ဆာ ဖြစ်သည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ် စက်တင်ဘာ ၂၇ ရက်တွင် ကုမ္ပဏီ ၏နောက်ဆုံး လျှောက်လွှာ စာရွက်စာတမ်း သည်မ မှန်ကန် တဲ့ အခြေအနေ ကိုပြသခဲ့သည်။
HKEx စာရွက်စာတမ်း များအရ ကုမ္ပဏီကို ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင် အီလက်ထရွန်း နစ် ကုန်ထုတ်လုပ်မှု ၀ န်ဆောင်မှုပေး သူအဖြစ် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ထုတ်လုပ်မှု စက်ရုံ များကို နေရာ နှစ် ခုတွင် လည်ပတ် သည်။ တစ်ခုမှာ Dongguan, China နှင့် Penang, မလေးရှား တွင်ဖြစ်သည်။
In-Tech Holdings ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဖောက်သည် များ, အထူးသ ဖြင့် မော်တော်ကား, အာကာသ, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ, ရေကြောင်း, ဘဏ်လုပ်ငန်း, လုံခြုံရေး, ကြိုးမဲ့ ဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက် စက်မှုလုပ်ငန်း များနှင့် အခြား အထူးပြု နှင့် မြင့်မား စည်းမျဉ်း စက်မှုလုပ်ငန်း များအတွက် ဖောက်သည် များအတွက် ထုံးစံ IoT နှင့် ပူးတွဲ-ဖှ ံ့ ဖွ ိုး တိုး တ ထုတ်ကုန် အပေါ် အာရုံစူးစိုက် ။
လွန်ခဲ့သော နှစ်အနည်းငယ် အတွင်း ကုမ္ပဏီ၏ ထုတ်ကုန် များတွင် စီးပွားဖြစ် လေယာဉ် စွမ်းအင် စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် များ၊ ရေကြောင်း သွားလာ မှုစနစ် များ၊ အသိဉာဏ်ရှိသော ရှေ့ပြေး စောင့်ကြည့်လေ့လာရေး စနစ် များ၊ အလွန် နိမ့်သော စွမ်းအင် သုံး IoT utility တူရိယာ များ၊။
ဘဏ္ terms ာရေး အရ ၂၀ ၂၀၊ ၂၀၂၁ နှင့် ၂၀ ၂၂ ဘဏ္ fiscal ာရေး နှစ် များတွင် ကုမ္ပဏီ၏ ၀ င်ငွေသည် ဟောင်ကောင်ဒေါ်လာ ၁. ၃ ၉၅. ၁ ဘီလီယံ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁ ၇၇. ၈ သန်း) ၊ ဟောင်ကောင်ဒေါ်လာ ၁. ၈ ၀၁ ဘီလီယံ နှင့် ဟောင်ကောင်ဒေါ်လာ ၂. ၀ ၈၉ ဘီလီယံ ဖြစ်သည်။ အထက်ပါ ဘဏ္ fiscal ာရေး နှစ်အတွက် အသားတင် အမြတ် မှာ ဟောင်ကောင်ဒေါ်လာ ၃၂. ၅၉ သန်း၊ ဟောင်ကောင်ဒေါ်လာ ၈၉. ၆၄ သန်းနှင့် ဟောင်ကောင်ဒေါ်လာ ၉၄. ၇၈ သန်း ဖြစ်သည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး ကုမ္ပဏီ ENL Group Holdings သည်ဟောင်ကောင် စတော့အိတ်ချိန်း သို့ နောက်ထပ် IPO လျှောက်လွှာ တင်သွင်း သည်
သို့သော် ကုမ္ပဏီ၏ ၀ င်ငွေ အများစု သည်လက်ရှိ ဖောက်သည် များ မှရရှိသည်။ ထို အထဲမှ စုစုပေါင်း ဝ င်ငွေ၏ ၈၃. ၃% သည် ၁၀ နှစ်ကျော် အတူတကွ လုပ်ကိုင် ခဲ့ကြသော ဖောက်သည် များ မှဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ထိပ်တန်း ဖောက်သည် ငါး ဦး သည် အစီရင်ခံစာ ကာလအတွင်း စုစုပေါင်း ၀ င်ငွေ၏ ၆၀% ကျော်ကို လှူဒါန်း ခဲ့သည်။